बन्दहड्तालमा देशभर कहाँ के-के भयो ? हेर्नुहोस मध्यान्ह १२ बजेसम्मको ताजा अपडेट — Sanchar Kendra
बन्दहड्तालमा देशभर कहाँ के-के भयो ? हेर्नुहोस मध्यान्ह १२ बजेसम्मको ताजा अपडेट
काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव समूहले आह्वान गरेको आमहड्तालको प्रभाव देशभरका सहरी क्षेत्रमा देखिएको छ । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छैनन् भने ग्रामिण भेगमा अवरोध छैन । शहरी क्षेत्रमा समेत भित्री बाटोमा गाडी चलेका छन् ।
त्यसक्रममा ठाउँठाउँमा सवारीसाधनमाथि ढुंगा प्रहार भएको छ भने काठमाडौंमा ट्याक्सीसमेत आगजनी भएको छ । प्रहरीका अनुसार देशभर ९७ जना पक्राउ परेका छन् । बिहीबार बिहान १० बजेसम्म उपत्यकासहित ७ प्रदेशमा कहाँ के-के भयो ?